Equity Media sy fiverenana amin'ny fampiasam-bola | Martech Zone
Equity Media sy fiverenana amin'ny fampiasam-bola
Alakamisy, Jona 2, 2011 Alakamisy Oktobra Oktobra 27, 2011 Douglas Karr
Gary Vaynerchuck dia lasa evanjelista amin'ny haino aman-jery sosialy izay hajanoko foana hihainoana, hanaraka ary hifanaraka amiko. Bryan Elliott vao haingana no nanadinadina an'i Gary tamin'ny andiany roa izay hamporisihako ny tompona orinasa rehetra… hatramin'ny kely ka hatramin'ny CEO… hihaino.
Nisy teboka iray tamin'ny resadresaka nahataitra ahy - ary tsy azoko antoka fa nisy ny fanamafisana izany tao amin'ilay tafatafa. Niresaka momba ny fametrahana orinasa i Gary fitoviana amin'ny media sosialy. Matetika ny mpivarotra sy ny orinasa dia mitady ny laza haingana, ny fampielezan-kevitra miaraka amin'ny famerenam-bola amin'ny famatsiam-bola. Mino aho fa tena mila mieritreritra ny media sosialy amin'ny fomba hafa ny orinasa.
Nolazaiko hatrany fa ny fihazakazahana dia hazakazaka marathon fa tsy haingam-pandeha. Manana mpanjifa aho ankehitriny izay sosotra satria, rehefa afaka volana maromaro, tsy hitany ny fiverenana goavambe izay ambaran'ny sasany ao amin'ny indostria. Hitan'izy ireo ny fitomboana sy ny fiakarana, na izany aza… ary izany no ifantohanay.
Mitovy amin'ny fametrahana vola ao amin'ny kaonty fisotroan-dronono izany ary manantena ny hisotro ronono afaka roa taona. Mety hitranga ve izany? Ataoko angamba fa mahavoa tahiry mipoaka ianao .. fa inona no vintana ?! Ny tena izy dia ny sioka tsirairay, ny bilaogy rehetra, ny valin'ny Facebook… ary ny manaraka azonao… dia fampiasam-bola kely amin'ny ho avin'ny orinasanao. Miala mitady vahaolana avy hatrany.
Tahaka ny kaonty fisotroan-drononoo dia jereo ny fironana ary alao antoka fa mandeha tsara ny lalana. Mitombo ve ny fanarahana anao? Mahazo olona bebe kokoa ve ianao? Mahazo milaza bebe kokoa, tianao ary retweet ve ianao? Ireo rehetra ireo dia nikela, denaria ary dimes rehetra napetraka ao amin'ny kaontinao amin'ny media sosialy.
Izaho manokana dia nanomboka tamin'ny media sosialy tokony ho folo taona lasa izay ary nanambola isan-kerinandro, raha tsy isan'andro. Ny olona sasany dia gaga amin'ny faingam-pandehan'ny orinasako, Highbridge, nitombo. Nanokatra ny biraonay herintaona mahery kely izahay ary maharitra 18 volana. Manana mpiasa maharitra 3 izahay ary orinasa mpiara-miasa amin'ny mpiara-miasa am-polony mahery izay miara-miasa isan'andro aminay. Manana mpanjifa avy any Nouvelle Zélande izahay, manerana an'i Eropa sy manerana an'i Amerika Avaratra.
Tsy nanangana ity orinasa ity aho tao anatin'ny herintaona na roa taona. Nanangana ny orinasa aho nandritra ny folo taona lasa, ary nanangana ny fahaiza-manao tao anatin'ny folo taona talohan'izay. Roa-polo taona fampiasam-bola amin'ny tenako sy ny vondrom-piarahamoniko amin'ny Internet alohan'ny Izaho dia nanokatra ny varavaran'ny orinasako! Mila faharetana, faharetana, fanetren-tena… ary faneriterena tsy an-kijanona mba hahomby.
Raha manomboka mampiasa vola haingana kokoa ny orinasanao fa tsy aoriana dia tsara ny vinan'ny orinasanao ary manana vondron'olona mpanjifa sy mpankafy mahatoky izy. Manomboha mametraka ny fitoviana amin'ny media sosialy anio ary tsy ho diso anjara ianao. Araka ny nambaran'i Gary, ny tetezamita rehetra amin'ny haino aman-jery maoderina - manomboka amin'ny gazety, amin'ny magazine, amin'ny radio sy fahitalavitra, dia nandevina orinasa tsy afaka nifanaraka. Raha manapa-kevitra ny tsy hampiasambola ny orinasanao dia tsara izany. Ny mpifaninana aminao dia.
Ny tara-doza dia tara loatra. Tsy mandeha ny fiezahana hisotro ronono amin'ny 65 rehefa manomboka manangona amin'ny 60 ianao. Sady tsy hampiasa vola amin'ny haino aman-jery sosialy. Mila manova ifotony ny fomba fijerin'izy ireo ny media sosialy, ny fikarohana (misy fiatraikany amin'ny fiarahamonina) ary ny varotra an-tserasera ny orinasa raha toa ka velona izy ireo rahampitso. Tsy lamaody io.
Ataovy intelo ny fifamoivoizan'ny bilaoginao amin'ireo mpitsidika manan-danja
Mamono ilay iPhone ny Thunderbolt
8 Jiona 2011 à 11:22
Izany no fomba tsapako tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Mamelombelona ny mahita ny fomba fijerinao momba izany ary mahafantatra fa mila fotoana ny ezaka amin'ny media sosialy na dia ao anatin'ny rivo-piainana karazana 'React NOW' aza!
Vao avy nibilaogy momba ny ahiahiko aho vao namaky an'ity! Namaky azy indray aho rehefa avy namaky ny lahatsoratro ary hitako fa nanoratra aho - "Heveriko fa ny ampahany sarotra indrindra amin'ny fitarihana ny ezaka amin'ny media sosialy dia ny faniriana vokatra eo no ho eo amin'ny tontolo misy valiny haingana!" (http://bit.ly/l5Enda).
Misaotra tamin'ny lahatsoratra Douglas! Ankasitrahana BE!
1 Aogositra 2012 à 7:58
Marina ny anao! Ny orinasa sasany dia nandray ny media sosialy tamin'ny fomba hafa. Eny, mila ezaka sy fotoana be dia be ny mijinja izay nafafinao.